Nyanzvi Dzoyambira Zanu-PF Kuti Isaunze Mitemo Inounza Nhamo
Nyamavhuvhu 02, 2013
WASHINGTON — Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nehupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kuita manyama amire nerongo kana Zanu-PF ikawana zvikamu zvinoipa masimba ekuvandudza bumbiro idzva.
Zviri kutyirwa nevanhu kuti zvinogona kuitwa neZanu-PF zvataurwawo negurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, avo vaudza nhepfenyuro yeBBC kuti kukunda kwavakaita kunoratidza kuti vanhu vaitambira hurongwa hwavo hwekuendesa hupfumi kuvatema.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Gofrey Kanyenze, vanoti vari kutyira kuti Zanu-PF ichatanga kudzika mitemo ichadzinga vekunze vanoda kutanga mabhizimisi.
Mashoko aya atsinhirwawo nenyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaJohn Robertson, avo vanoti havo havaone paine munhu angade kuvamba bhizimisi kana achiziva kuti anotorerwa zvikamu zvakakura zvemari yaanenge avamba bhizimisi nayo.
Imwe nyanzvi munyanya dzezvehupfumi, VaLuxson Zembe, avo vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce, vanoti havaoni Zanu-PF ichiita zvayaitaura mukutsvaga rutsigiro nekuti kuda kuita izvi kungava kuzvisikira moto muziso.
VaZembe vanotiwo vanovimba kuti Zimbabwe ichatanga kudyidzana neAmerica nedzimwe nyika dzakatemera vakuru veZanu-PF zvirango nekuti izvi zvikasaitika, hupfumi hucharamba huri mumadhaka.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru we Zimbabwe Democracy Institute, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti kukunda kweZanu-PF kune mutauro uye kuchadzorera nyika kumashure zvakanyanya.
Asi VaRuhanya vanoti veMDC havafanire kurasa mbereko nekufirwa uye vanofanira kufunga zvakadzama kuti voita sei mune remangwana.